Famokarana arovava Efa manomboka tratra ny 150 000 isan-andro
Nisy didim-pitondrana nivoaka mibaiko amin` ny fanaovana arovava. Maro ireo mpitandro filaminana no miezaka manentana ny rehetra amin`ny fanaovana izany fiarovana manokana izany.
Araka ny fampitaham-baoavao voaray, 5 tapitrisa ireo arovava no efa nokaomandin` ny Fitondram-panjakana andro vitsivitsy lasa izay. Nanamafy ny mpitondra tenin` ny governemanta fa izay vao tena niodina ny famokarana ka 150 000 isa ireo arovava henjehina isan-andro. Orinasa dimy moa no miara-misalahy manao izany. Efa nisy ny fizarana andiany voalohany ka tany Tomasina I sy II, ary Matsiatra Ambony no faritra nisitraka izany. Ireo sokajim-piarahamonina tena mila maika ireny avovava ireny no mahazo voalohany.